ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများ - PACE Myanmar
ဇန်နဝါရီ 17th, 2021
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအတွင်းက ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (PACE)အနေနဲ့ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်က ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သဘောထားအမြင်များကို သိရှိနိုင်ဖို့ လေ့လာမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာ ထုတ်ပြန်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလ အကန့်အသတ်များနဲ့ PACEရဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့် ကိစ္စရပ်များကြောင့် အခက်အခဲရှိခဲ့ပြီး ယခုအချိန်မှ ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ရှိ စက်ရုံအရေအတွက်၊ လုပ်သားအရေအတွက်စာရင်းအပြည့်အစုံမရရှိနိုင်ခြင်း၊ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူရွေးချယ်မှုနည်းစနစ် အကန့်အသတ်ရှိခြင်းတို့ကြောင့် စက်ရုံလုပ်သားများအားလုံးရဲ့ သဘောထားအမြင်ကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ခြင်းမရှိပေမယ့် နောင်ပြုလုပ်မယ့် ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း (FED) နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (PACE) တို့ ပူးပေါင်းပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ဒေသ ၅ ခုက မြန်မာလုပ်သားများရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သဘောထားအမြင်များကို သိရှိနိုင်ဖို့ လေ့လာမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာ ထုတ်ပြန်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလ အကန့်အသတ်များနဲ့ PACEရဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့် ကိစ္စရပ်များကြောင့် အခက်အခဲရှိခဲ့ပြီး ယခုအချိန်မှ ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာလုပ်သားများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုနဲ့ ဆန်းစစ်လေ့လာမှု ပြုလုပ်တဲ့ နည်းစနစ်မှာ အကန့်အသတ်တွေရှိခဲ့တာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာလုပ်သားအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာလုပ်သားများရဲ့ မဲပေးခွင့်အတားအဆီးများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရာမှာ အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်
နိုဝင်ဘာ 9th, 2020
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၏ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံကြည့်ပါက ယေဘုယျအားဖြင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းကာ ကြီးမားသည့်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် စိန်ခေါ်မှုနှင် အကန့်အသတ်များရှိသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဖြစ်စဉ်ကို တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြသည့် မဲရုံဝန်ထမ်းများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်လိုပါသည်။ ‌
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်မှု ကနဦးအစီရင်ခံစာ
နိုဝင်ဘာ 1st, 2020
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလ စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (People’s Alliance for Credible Elections-PACE) က ကာလရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၃၁၉ ဦးကို . . .
အောက်တိုဘာ 5th, 2020
အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံ ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်ဤအစီရင်ခံစာမှာ ယခုနှစ်လယ်ပိုင်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (People’s Alliance for Credible Elections-PACE) က တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်ကောက်ယူခဲ့သည့်​ ရွေးကောက်ပွဲအကြို လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းတွေ့ရှိချက်များ၏ ကနဦးအစီရင်ခံစာဖြစ်ပါသည်။
ဇူလိုင် 26th, 2019
ယခုကျင်းပနေသည့် လွှတ်တော်များ၏ သက်တမ်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်တွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ရာ နောက်လွှတ်တော်သက်တမ်းအတွက် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းလောက်တွင် ကျင်းပလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်။ လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေမူဘောင်အရဆိုလျှင် . . .
မတ် 28th, 2019
ယေဘုယျအားဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာ တည်ငြိမ်ချောမွေ့သည်ဟုဆိုနိုင်ပြီး စောင့်ကြည့် လေ့လာခဲ့သည့် မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ ခုလုံးတွင် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်စေသည့် ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမားကိုလည်း စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတစ်လျှောက်လုံးတွင် မတွေ့ရချေ။
စက်တင်ဘာ 28th, 2018
ဇန်နဝါရီ 19th, 2018
PACE အဖွဲ့အနေဖြင့် နိုင်ငံသားများ၏ ဒီမိုကရေစီမျှော်မှန်းချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ခုကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ . . .
၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အစီရင်ခံစာ
စက်တင်ဘာ 1st, 2017
ဇန်နဝါရီ 29th, 2021
ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များ၏ ပူးတွဲကြေညာချက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်အခြေခံကာ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပွားနေသည့် အငြင်းပွားမှုများကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှု၊ အာဏာလွှဲပြောင်းမှု ကြန့်ကြာစေနိုင်သည် သာမက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ နှောင့်နှေးတုံ့ဆိုင်းသွားမည့် အခြေအနေများအတွက် နိုင်ငံအတွင်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ပေါ်ပေါက်နေပါသည်။ ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့် လေ့လာသူများအနေဖြင့် ​၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင် ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလအတွင်း မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ကြေညာပြသခြင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်း၊ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့မဲပေးခြင်း၊ ဆန္ဒမဲများရေတွက်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တို့အပြင် မဲရလဒ်များစုစည်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အသီးသီးတွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုများအရ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမူဘောင်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ အားနည်းချက်များအပြင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ အကန့်အသတ်များကြောင့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ …
Continue reading “ ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များ၏ ပူးတွဲကြေညာချက်”
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနေ့ မဲရုံပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မဲရုံဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်စဉ်အပေါ် တွေ့ရှိချက်များ
နိုဝင်ဘာ 8th, 2020
နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်တွင် ကျင်းပနေသော ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (PACE) က စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၁၈၈၈ ဦးကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၁၄ ခုလုံးရှိ မဲရုံများသို့ စေလွှတ်
ဩဂုတ် 24th, 2020
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် PACE အဖွဲ့ ပါဝင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က စောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့် ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဟု ဆိုသော်လည်း အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက် ရပြီးမှသာ အသိအမှတ် ပြုလွှာထုတ်ပေးမည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဩဂုတ် 13th, 2020
နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (People’s Alliance for Credible Elections – PACE) ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန် ခွင့်မပြုကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါသည်။
ဇန်နဝါရီ 27th, 2020
၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ နယ်နမိတ်ဖြစ်သည့် မြို့နယ် ၃၃ မြို့နယ်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအဆင့်ဆင့်အတွက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နိုင်ငံသားတိုင်း မဲပေးခွင့်ရသည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဖြစ်စဉ်မှာ ချောမွေ့သော်လည်း မဲလာပေးသူဦးရေ အလွန်နည်းပါးသောကြောင့် PACE အဖွဲ့က စိုးရိမ်ပါသည်။ မဲဆန္ဒရှင်များကို မဲပေးရန်တိုက်တွန်း
၂၀၁၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ကနဦးအစီရင်ခံစာ
နိုဝင်ဘာ 4th, 2018
နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်တွင်ကျင်းပသည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆန္ဒနယ် ၁၃ ခုအနက် ၁၂ ခုတွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် PACE နှင့် ဖန်တီးအိမ်အဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၅၇၉ ဦးကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။
အောက်တိုဘာ 17th, 2018
စက်တင်ဘာ ၃ ရက်မှစ၍ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (PACE) နှင့် ဖန်တီးအိမ် အဖွဲ့တို့မှ ကာလရှည်စောင့်ကြည့်​လေ့လာသူ ၁၂ ဦး ကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် ဒေသများရှိ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပတ်ဝန်းကျင်၏ အနေအထားများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာစေခဲ့ပါသည်။
ဇူလိုင် 13th, 2018
၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ၏ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသားများ၏သိရှိမှုနှင့် ပါဝင်လိုစိတ်အတိုင်းအတာတို့ကို သိရှိနိုင်ရန် ဇွန်လ ၂၉-၃၀ ရက်တို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလစစ်တမ်းတစ်ခုကို လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ ခု၌